Kedu ihe bụ TLD? A kọwara ngalaba dị elu | Martech Zone
Sunday, November 20, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị parse ọ bụla na ngalaba aha, na n'elu-larịị ngalaba bụ akpatre ikpehe ke akpatre ntụpọ. Nke ahụ bụ ọkwa kachasị elu n'ime usoro nhazi nke ngalaba aha. Yabụ, maka chukwuebuka, na TLD is .com.
Mgbe ebido web ahụ na United States, ọ dị mfe icheta ngalaba aha. .com pụtara na ị nọ na saịtị ụlọ ọrụ, .org pụtara na ị nọ na saịtị na-enweghị uru, .edu pụtara na ị nọ na mahadum ma ọ bụ saịtị ụlọ akwụkwọ, NET pụtara na ị nọ na ntanetị, .m Ọ pụtara na ị nọ na saịtị ndị agha, na .gov pụtara na ị nọ na saịtị gọọmentị. Enwere ike ịdenye aha ngalaba maka .com, .net, na .org na-enweghị mmachi ọ bụla ma ndị ọzọ nwere njedebe ụfọdụ.
TANN kwadoro ma rere site na ICANN:
ICANN bụ ụlọ ọrụ na-enweghị uru maka ọha na eze na ndị sonyere n'akụkụ ụwa niile raara onwe ha nye idobe Internetntanetị, echekwa ma nwee mmekọrịta. Ọ na-akwalite asọmpi ma na-emepe iwu na ihe nchọpụta pụrụ iche nke Internetntanetị. Site na nchikota ya nke sistemụ ịntanetị, ọ nwere mmetụta dị mkpa na mgbasa na ntopute nke ịntanetị.
Ka ọ na-erule 2016, e mere TLDs 1300 ọhụrụ maka iji ya na, n'ọtụtụ ọnọdụ, maka ọrịre ọhaneze Iji hụ ndepụta niile, gaa na Mpaghara nchekwa mpaghara, nke na-akọwa ngalaba niile dị elu, gụnyere gTLD dịka .com, na mba-koodu TLDs dị ka .uk.
Nke a bụ ihe niile ịchọrọ ịma gbasara TLDs maka Eziokwu Bochum.
Tags: domainNkejingalaba nhazi larịị